छोरालाई शुभकामना चिठ्ठी | Purna Oli Free songs
Home / चिठीपत्र / छोरालाई शुभकामना चिठ्ठी
Posted by: Purna Oli in चिठीपत्र March 16, 2020	0 716 Views
मेरो इस्पातजस्तै छोरा, तिमीलाई जन्मदिनको अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवम् दीर्घायुको मस्तै मस्तै शुभकामना !!
सुन्ने गरेको थिएँ, फलामलाई पिट्दा पिट्दा इस्पात बन्दछ । राजनीतिमा हार्डलाइनरहरुलाई इस्पातको उपमा दिने गरिन्छ । धेरै कठिन संघर्षहरुबाट सफलता प्राप्त गर्नेहरुलाई पनि इस्पातकै उपमा भिडाइन्छ । तर प्यारो कान्छो छोरा परिक्षित, तिमीलाई मैले यस प्रकारको उपमा दिन खोजेको भने होइन । तिमी साँच्चिकै फलाम थियौ र पिटिँदा पिटिँदा आजसम्म तिमी साँच्चिकै इस्पात बन्न पुग्यौ ।
तिमी जन्मँदा तिम्रो जीउ सिन्कासरह दुब्लो पातलो थियो, तिमी फलामकै सियोजस्तै थियौ । सायद अस्पत्तालमा जन्मेको भए तिम्रो तौल औसत शिशुको भन्दा निकै नै कम भएको पत्तो लाग्दथ्यो । त्यो कुरा कसरी थाहा पाउनु ? तिमी त आजभन्दा चौबीसवर्ष पहिले विकट स्थलको माटोको घरको झुप्रोको भुइँमा प्राकृतिक रुपमा जन्म लिएका थियौ । तिमी जन्मनुपूर्व प्रसववेदनामा रोइरहेकी तिम्री आमाको रुवाइ तिमीले जन्मनेबित्तिकै सापटी माग्यौ र उनी हाँस्न थालिन्, तिमी भने रुन थाल्यौ । तिम्रो रुवाइ आम नवजात शिशुको लागि स्वाभाविक नै थियो । तर अस्वाभाविक के भैदियो भने अरु शिशुहरु केही अवधिपछि रुन छोड्छन्, तर तिमी भने रुन छोडेनौ । तिमी सुत्दा मात्र रुवाइ बन्द हुन्थ्यो, उठ्नेबित्तिकै रुन थालिहाल्थ्यौ ।
तिमी दुईतीन महिनाको हुँदासम्म पनि रुन छाडेनौँ । हामीले त्यसपछि तिमीलाई तिमाल्ने एक मात्र उपाय पत्ता लगायौँ, त्यो उपाय थियोः तिमाल्नको लागि तिमीलाई पिट्नु । तिमीलाई दूध पुग्थेन होला, तिम्रो शारीरिक अवस्था कमजोर रहेकोले जहाँ छोए पनि उतै दुख्थ्यो होला । तिम्रा रुवाइको कारण अरु पनि थुप्रै थिए होलान् । तर ती कारणहरु खोज्नतिर हामी लागेनौँ । तिमी रुँदा तिमीलाई तिमाल्न हामीले हात छोडिहाल्थ्यौँ, तिमी अझै चिच्याउँथ्यौ, हामीले अझै पिट्थ्यौँ । तिमी रुँदारुँदै जब सुत्थ्यौ अनि मात्र पिटाइबाट मुक्ति पाउँथ्यौ । तर जब ब्युँझन्थ्यौ अनि रुन थालिहाल्थ्यौ, तसर्थ तिमीले श्रृङ्खलाविहिन पिटाइ खाइरहन्थ्यौ ।
तिमीमा अर्को अनौठो कुरा यो थियो कि जसले पिट्छ उसैलाई तिमीले बढी पछ्याउँथ्यौ । हरदम् तिम्रो नजिक भइरहने तिम्री आमाले तिमीलाई बढी पिट्थिन्, तिमीले उनैलाई पछ्याइरहन्थ्यौ । तीनचार वर्षको भइसक्दा पनि भूँइमा एकछिन बस्न मान्दैनथ्यौ । दिशापिशाब, धारापानी गर्दा पनि तिमीलाई पिठ्यूँमा बोकेरै तिम्री आमाले उतिबेलाको आफ्नो अनिवार्य कठिनतम् बुहार्तन बेहोर्थिन् । आमापछि तिम्रो बाबु नै तिम्रो नजिक बढी पर्ने भएकोले तिमीलाई उसैले बढी पिट्थ्यो र त्यसै कारणले मलाई पनि तिमीले कम पछ्याउन्नथ्यौ । सायद तिमीले त्यतिबेला बुझ्थ्यौहोला कि जसले आफूलाई बढी पिट्छ त्यो नै आफ्नो सबभन्दा नजिकको नातेदार हो ।
केही परिबन्द र केही परिस्थितिले गर्दा मैले तिमी शिशुअवस्थामै हुँदा तिमीलाई छोडेर काठमाण्डौको सुविधावासी हुन पुगेँ । यता हुँदा तिमीलाई पिट्न नपाउँदा मेरा हात चिलाइरहन्थे । जब हात चिलाउँथे, अनि तिमीलाई बेस्मारी सम्झन्थेँ ।
तिमी अलिअलि गर्दै बढ्दै गयौ र अलिअलि बुझ्ने पनि हुँदै गयौ तर पनि रुने जस्तो तिम्रो निरन्तर काम पटक्कै छोडेनौ । तिम्रा आवश्यकता के थिए स्पष्ट भन्न नसक्नु वा हामीलाई बुझाउन नसक्नु पनि रुवाइको अर्को कारण हुन सक्थ्यो ।
जब लोकसेवामा मेरो नाम निक्लियो तिमी आमा तथा दाजुदिदीसँग काठमाण्डौसम्म रुँदैरुँदै आइपुग्यौ । तिमीलाई के गरे तिम्रो रुवाइ बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म तब पनि आर्थिक वा मनोवैज्ञानिक हिसाबले सक्षम भैसकेको थिइनँ । गठ्ठाघरस्थित साहित्यकार युद्धप्रसाद मिश्रको घरमा डेरा थियो । त्यसबेला भाइ प्रकाश, भदाहा सुशिल, साला मन्त्री (तोषराज) पनि साथमै दिए । एक दिन म दारीजुँगा लामा भएकोले साबुनको फिँज उतारेर सफाचट पार्दै थिएँ, दायाँपट्टि सफा गरिसकेको थिएँ, बायाँपट्टि बाँकी नै थियो, त्यतिबेलै तिमीले केही कुरामा रुने निहुँ झिक्यौ र दारी काट्न छोडेर तिमीलाई पिटिदिएँ । तिमी मेरो हातबाट फुत्कियौ र गठ्ठाघर बजारतिर चिच्याउँदै कुद्न थाल्यौ । मैले बाँकी दारी सफा गर्न त्यत्तिकै छोडेर तिमीलाई पक्रन दौडिएँ तर भेट्टाउन सकिनँ । सुशिल र मन्त्रीलाई गुहारेँ उनीहरुले तिमीलाई भेट्टाउन मद्दत गरे । मेरो अनुहार एवम् अवस्था देखेर बजारका मान्छेहरु सुशिल मन्त्री सबै हाँसिरहेका थिए, तिमी मात्र रोइरहेका थियौ ।
जब तिमी मेरो फेला पर्‍यौ, म रिसले चूरचूर भैसकेको थिएँ । तिमीलाई थाहा नै थियो तिमीले के सजाय पाउन सक्थ्यौ भन्ने । मैले तिमीले सकुन्जेल मर्मत गरेँ । तिम्री आमाले “यति सानो बच्चोलाई यो के गरेको अलिकति पनि दयामाया छैन ?” भनी छुटाउन आएपछि मात्र तिमीले मेरो पिटाइबाट छुट्कारा पायौ ।
अर्को घटना झनै बिर्सन लायक छ ।
सरकारी जागिरी पाइसकेपछि पनि म एउटा सानो परिवारलाई पाल्न सक्षम भइनँ । तसर्थ तिम्रो दिदी र दाइलाई आफूसँग राखेर तिमी र तिम्री आमालाई रुकुमकै घरतिर पठाइदिएँ । मेरो पिटाइबाट त तिमीले केही समय मुक्ति पायौ, यता मेरो हात चिलाइरह्यो ।
केही वर्षपछि मलाई भेट्न फेरि काठमाण्डौ आइपुग्यौ । त्यतिखेर सानोठिमीमा यस्तै कुनै निहुँमा तिमी फेरि भागिदियौ । भेट्टाएपछि तिमीलाई एउटा कोठामा भित्रबाट चुकुल लगाएर थुनेँ । यसरी थुनेपछि तिमीलाई जोगावट गर्न कोही आउने सम्भावना थिएन । अनि बेरोकटोक तिमीले मेरो हातको निर्घात चुटाइ खायौ । त्यत्रोविधि चुट्दा पनि तिमीले राक्षसको रुप धारण गरिरहेको बाबुप्रति पटक्कै आक्रोश देखाएनौ । वश् अबोध बिलौना गर्दै रोइरह्यौ, रोइरह्यौ ।
“मलाई नपिट्नू के बाबा ! मेरो केही पनि बिराउँ छैन ।” मात्र अलापिरह्यौ । उतिबेला तिमीले हिक्का छोडेर क्षमायाचना गर्न नसक्ने भएपछि मात्र मेरो चुटाइबाट मुक्ति पाएका थियौ ।
अर्को घटना भने सम्झन लायक छ ।
तिमी रुकुमको सरकारी स्कूलमा कक्षा एकमा पढ्दै थियौ त्यतिबेला नै तिमी काठमाण्डौमै पढ्ने अवसर पाउने भयौ । उता एक कक्षामा पढिरहेकोले सानोठिमीस्थित सस्तोखालको बोर्डिङ स्कूलमा (बिराट) तिमीलाई भर्ना गरियो र तिमीलाई पढ्न पठाइयो । बेलुका स्कूल छुट्टि भएपछि तिमी रुँदै फर्कियौ । त्यस बेलुका तिमीले खाना खान पनि मानेनौ । तिमीलाई तिमाल्ने अचुक उपाय हामीसँग छँदै थियो । तिमीलाई हामी आमाबा मिलेर चुट्न थाल्यौँ । तर पनि तिमीले खान मानेनौ । खाने मात्र होइन जति चुटे पनि तिम्रो हिक्का बन्द भएन र त्यस रातभर सुत्दै सुतेनौ । बल्ल हाम्रो होश खुल्यो कि तिमीलाई चुटेर पनि अब थकाउन सकिँदैन । तिमीलाई रुवाउँदा रुवाउँदै स्कूल पठाउनू जोखिम थियो भन्ने कुरा धेरै पटक भागेर हामीलाई सतर्क गराइसकेका थियौ ।
तिमीलाई हामीहरुले फकाउन थाल्यौँ ।
अनि मात्र तिमीले भन्यौः “म एक कक्षामा पढ्दिन ।”
“कतिमा पढ्छौ त ? युकेजीमा ?”
“नाइँ, युकेजीमा पनि पढ्दिनँ ।”
“एलकेजीमा पढ्छौ त ?”
“अँ, पढ्छु ।”
तिम्रो मागअनुसार तिमीलाई भोलिपल्ट एलकेजीमै भर्ना गरियो । बल्ल तिम्रो रुवाइ बन्द भयो । त्यसपछि तिम्रो भगाई पनि बन्द भयो । तिम्रा अव्यक्त मागहरु पनि बन्द भए । फलस्वरुप तिमीउपरको अमानवीय चुटाइ पनि चमत्कारिक रुपले ठ्याम्मै बन्द भैदियो ।
तिमीले तीन महिनामै टर्मिनल एक्जाममा फस्ट भएर देखाइदियौ । स्कूलका प्रिन्सिपलको सुझाव र तिम्रो सहमतिअनुसार चौथो महिनामा तिमीलाई युकेजीमा अपग्रेड गरियो । वर्षान्तमा युकेजीमा पनि प्रथम भइदियौ । अर्को वर्ष तिमीलाई एककक्षाको सट्टा दुई कक्षामा भर्ना गरियो । त्यो कक्षामा तिमी पुनः प्रथम भइदियौ । प्रिन्सिपलको सुझाव थियो, पुनः तिम्रो क्लास जम्प गराउने तर तिमीले पनि मानेनौ र मैले पनि तिम्रो रुवाइ र आफ्नो चुटाई दोहोर्‍याउन नचाहेकोले जम्प गराउन मानिनँ र तिमीसँगै पूर्णरुपमा सहमत भएँ । तिमीले आफ्नो प्रतिभा देखाउने प्रशस्त स्थान पाउने भयौ ।
बिराट स्कूलका आआफ्ना कक्षाहरुमा तिमीहरु तीनै भाइबहिनी प्रथम भइदियौ । त्यसपछि नयाँवानेश्वरको सोसाइटल स्कूलमा तिमीहरुलाई भर्ना गरियो । त्यहाँ पनि आआफ्नो कक्षामा तीनैभाइबहिनीले प्रथम भएर स्कूलमा तहल्का मच्चाउन सफल भइदियौ ।
तहल्का किन भनेको भने त्यतिबेला प्रथम हुनेलाई स्कूलले पूर्णतः निशुल्क छात्रवृत्ति दिन्थ्यो । एउटै परिवारका तिमी भाइबहिनीहरु एउटा निजी स्कुलमा तीनैजना पूर्ण छात्रवृत्तिको हकदार भैदिएका थियौ । स्कूलका व्यवस्थापक भन्थेः तीनैजनालाई निशुल्क गर्न सकिँदैन, तसर्थ कम्तीमा एकजनासम्मको फि तिर । मैले भन्थेँ: उसोभए एकजनालाई मात्र पढाऊ, अरु दुईजनालाई अरु नै स्कूलमा भर्ना गरिदिन्छु । उनीहरु तिमीहरुजस्ता मेधावी विद्यार्थीलाई स्कूलको फिको कारणले मात्र गुमाउन पनि चाहन्नथे । अतः एकजनाको आधा मात्र शुल्क तिर्ने सम्झौता गरी तिमीहरुलाई त्यस स्कूलमा पढाइएको थियो । तिमीले आफ्नो बाबुको पैँसा र इज्जत एकैसाथ जोगाइदिएर पिटाइको गुण तिरेका थियौ ।
त्यसपछि सानोठिमीस्थित एसओएसमा नाम निकालेर टप फाइभ भित्र पर्दै त्यहीँबाट हाइ डिस्टिँक्सनमा स्कूले शिक्षा सक्यौ । साथसाथै ओली वंश समन्वय समितिबाट एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेको सम्मान पनि बटुल्यौ । तिमीले प्लसटु अध्ययनको लागि सेन्टजेभियर्समा नाम निकाल्न सफल भयौ । पास हुनेबित्तिकै पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबिबिएसमा पनि नाम निकाल्न सफल भयौ र अहिले इन्टर्नशिपको अन्तिम चरण पार गर्दैछौ । अबको दुईतीन महिनाभित्र डाक्टरको उपाधिसहित कर्मक्षेत्रमा उत्रिने छौ । यो सबै प्रगतिबाट तिमीले त्यही मेरो पिटाईको गुण पाइपाइको हिसाबले तिरिरहेको ठानिरहेको छु मैले ।
यसरी नै तिमी तीनै भाइबहिनीले तिमीहरुलाई लाग्ने शैक्षिक शुल्कको भारबाट मलाई काठमाण्डौजस्तो महंगीको मारमा मुक्ति दिलाइदिने मात्र होइन आफ्नो प्रगतिको मार्ग आफैले प्रशस्त गरेका थियौ । नत्र भने चाकडीबाजहरु मात्र बाँच्न सक्ने पेशा अपनाएर तिमीहरुको जोगाड गर्न मैले किमार्थ सक्दिनथेँ ।
सायद त्यही पिटाइको अभिशाप हुनुपर्छ जीवनको उत्तरार्धमा मैले विभिन्न प्राकृतिक एवम् मानवीय पिटाइहरु लगातार भोग्दै आइरहेको छु । फलस्वरुप फलामबाट इलास्टिक जस्तो अत्यन्तै कमजोर र झन् तान्यो झन् संकुचित हुँदै जान अभिशप्त भएको छु ।
तिमीले आफ्नो सहोदर दाइलाई दुर्घटनामा गुमाउनुपर्दाको क्षणमा अर्को एकपटक नथामिने गरी रोएका थियौ । तर तत्क्षणै हाम्रो अगाडि थामिएर देखाइदियौ । सन्तान बिछोडमा अत्तालिएका बाबुआमालाई अझै बिचलित हुन नदिन बाँकी रुवाइ भित्रभित्रै घुटुक्कै पिइदिएर हाम्रो आडभरोसाको आधार बनिदिएका थियौ । त्यतिबेला पनि तिमीले आफू साँच्चिकै इस्पातजस्तै भएको प्रमाणित गरिदिएका थियौ ।
मेरा हात त अहिले पनि चिलाइरहन्छन् । तर तिमीलाई अनाहकमा बारम्बार पिटिरहने यी हातहरुले यथेष्ट कारणहरु हुँदाहुँदै त्यो दुर्घटनाका योजनाकारहरुको कठालो समातेर घिच्याउँदै त्यसैगरी चौबाटोमा किचिमिचि पार्न सकेनन् । जीवनवृत्तिको क्रममा अनाहकमा दुःख दिँदै झनझन कमजोर तुल्याउन लागिपरेकाहरुलाई पक्रिएर तिनै हातहरुले निर्घात चुट्न पनि सकेनन् ।
किनभने तिम्रो पिटाईबाट तिमीले आफ्नो बाबुलाई धेरै नै संयमताको पाठ घोकाइसकेका थियौ । फलस्वरुप तिमीउपरको पिटाईको प्रायश्चित गर्दै तिम्रो सुन्दर भविष्य कल्पना गर्नसक्ने तुल्याइदिएका छौ । आफू इस्पातसरह बनेर मलाई भने नौनीसरह तुल्याइदिएका छौ ।
फेरि पनि तिम्रो जन्मदिनको अवसरमा लाखौँलाख शुभकामना बाबु ।
उही तिम्रो बाबा ।
२०७६।११।२९, दुवाकोट ।
719 total views, 8 views today
Previous: मुसी नाटकको समीक्षा
Next: क्यार्दान र बलै ! (कोरोना विशेष-१)
Archives Select Month December 2020 November 2020 September 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 January 2020 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 January 2019 December 2018 October 2018 September 2018 July 2018 March 2018 December 2017 November 2017 October 2017 August 2017 July 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015